समाचार - कसरी एक पेशेवर र राम्रो लॉकस्मिथ बन्ने?
कसरी एक पेशेवर र राम्रो लॉकस्मिथ बन्ने?
यस तरिका छ
व्यापार रोजगार आज निरन्तर माग मा छन्। धेरै व्यक्तिहरू शिक्षक, डाक्टर र वकिल बनेपछि थोरै मात्र इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर र लकमथ्री बनिरहेका छन्। वास्तवमा, लकस्मिथिंग एक आकर्षक उद्योग हो जसमा उनीहरूले कसरी जान्दछन् भन्ने बारेमा अधिक व्यक्तिहरू पत्ता लगाउन सक्दछन्। यस फिल्डमा रुचि राख्ने कोहीलाई पनि राम्रो स्कूल, काम गर्ने अनुभव, र प्रमाणपत्रहरूको साथ एक पेशेवर लॉकस्मिथ कसरी बन्ने भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ।
प्रशिक्षण प्राप्त गर्नुहोस्
कुनै पनि व्यापार काम जस्तै, तपाईं लकस्मीथिंग मा प्रशिक्षित हुनु पर्छ। यसमा विभिन्न प्रकारका लकहरू, लक उठाउने प्रविधिहरू, मरम्मत लकहरू, बनाउने र प्रतिलिपि बनाउने, उचित सुरक्षा स्थापना बुझ्ने, र अधिकको बारे जान्नु समावेश छ। प्रशिक्षण र शिक्षा व्यावसायिक स्कूलहरू वा सामुदायिक कलेजहरूमा हुन्छन्। आवासीय, वाणिज्यिक, र यहाँसम्म कि विभिन्न तालिम र वर्कशपहरूको माध्यमबाट सवारीसाधन ताल्चा बनाउने सीपहरू सिक्नुहोस्। तपाईंले प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमहरूमा थप प्रशिक्षण फेला पार्न सक्नुहुनेछ जहाँ तपाईं अनुभवी लॉकस्मिथ अन्तर्गत प्रशिक्षण गर्नुहुन्छ। जबकि यो कार्यक्रम भुक्तानी गरिएको हुन सक्छ, ज्ञान, कौशल, र अनुभव हासिल गर्‍यो कि तपाइँ कानूनी र प्राविधिक तालाबन्दी दायित्वहरूको लागि योग्य हुनुहुन्छ।
केहि स्थानहरूमा तपाइँलाई आवश्यक इजाजत पत्र प्राप्त गर्नु अघि निश्चित समयको लागि काम गर्न आवश्यक पर्दछ। यस अवस्थामा, लकस्मिथिंग इजाजतपत्रको लागि आवेदन दिन अघि कम्तिमा एक वर्ष काम गर्नुहोस्। यस अनुभवले तपाईंलाई लिभरेज र केही वित्तीय स्थिरता दिनेछ जब थप प्रमाणपत्रहरूका लागि आवेदन दिनुहुन्छ। सबै उपयुक्त उपकरणहरू सम्झनुहोस् र लकपिकि sets सेटहरू काम को लागी
तपाइँको इजाजत पत्र प्राप्त गर्नुहोस्
त्यसो भए, तपाईंको लकस्मिथिंग इजाजतपत्र प्राप्त गर्नुहोस्। जबकि प्रत्येक संघ वा व्यावसायिक संगठनलाई यसको आवश्यक पर्दैन, यसले सुरक्षा र व्यावसायिक स्तरहरू लकस्मिथिंगको साथ बुझ्ने सुनिश्चित गर्दछ। योग्य दस्तावेज र पूरा पृष्ठभूमि जाँच योग्यको साथ आवेदन गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो स्थानीय स्तर मा जानकारी को लागी आफ्नो स्थानीय लॉकस्मिथिंग संगठन संग परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ।
एक व्यावसायिक प्रमाणपत्र कमाउनुहोस्
ती सबै पछि, एक पेशेवर लकस्मीथ बन्ने अर्को चरण भनेको व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु हो। अमेरिकाको एसोसिएटेड लॉकस्मिथ (ALOA) भित्र प्रत्येक स्तरमा आधारित परीक्षाले तपाईंलाई उचित प्रमाणीकरण प्रदान गर्दछ। त्यहाँ चार हालका स्तरहरू छन् जुन तपाइँ मास्टर गर्न सक्नुहुन्छ: रेजिष्टर्ड लकस्मिथ (आरएल), सर्टिफाइड रेजिष्टर्ड लॉकस्मिथ (सीआरएल), सर्टिफाइड प्रोफेशनल लॉकस्मिथ (सीपीएल), र सर्टिफाइड मास्टर लकस्मिथ (सीएमएल)। यी सर्टिफिकेटहरू भएमा तपाईले योग्य उद्योगीको रूपमा उद्योग भित्र खडा हुन सक्नुहुन्छ।
सिकाई राख्नुहोस् वा एक पेशेवर संगठनमा सम्मिलित हुनुहोस्
अन्तमा तपाईको विश्वसनीयतालाई अगाडि बढाउनका लागि त्यहाँ दुई विकल्पहरू छन्: शिक्षा वा काम। जो मानिसहरू आफ्नो सीप र ज्ञानको चाहना राख्छन् उनीहरूले अप्रेन्टिसशिप, लकस्मिथिंग स्कूल, ट्रेड स्कूल, वा अन्य मान्यता प्राप्त संस्था मार्फत आफ्नो शिक्षा जारी राख्न सक्दछन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, थप शिक्षाले तपाईंलाई अधिक प्रमाणीकरण परीक्षा पास गर्न मद्दत गर्दछ जसले ग्राहकहरूको साथ तपाईंको विश्वसनीयता बढाउँदछ। अवश्य पनि, तपाइँले केहि समय काम गर्नु पर्छ। एक पेशेवर लॉकस्मिथ संगठन वा संघ मा स्थानीय प्रतिनिधित्व खोज्नुहोस्। यी संस्थाहरूको सदस्यताले तपाईंलाई थप शिक्षा अवसरहरू प्रदान गर्न सक्दछ, कानूनी प्रतिनिधित्व, बीमा, स्वास्थ्य बेनिफिट्स, रोजगार सुरक्षा, र अधिक।